SarcoidosisUK အရည်အသွေးမြင့်မား, အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေအတွက်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ sarcoidosis လူနာမကြာခဏရှုပ်ထွေးနှင့်သူတို့၏အခွအေနေအားဖြင့်အထီးကျန်ခံစားရကြောင်းကိုငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာသတင်းအချက်အလက်လက်ကမ်းစာစောင်များ sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်မည်သူမဆိုပညာပေးကူညီမယ့်စိတ်ကူးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်။
အောက်ပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်လက်ကမ်းစာစောင်များအမျိုးမျိုးသော sarcoidosis အထူးကုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. SarcoidosisUK ကရေးသားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကဗြိတိန်ကိုဖြတ်ပြီးထိပ် sarcoidosis အတိုင်ပင်ခံနှင့်ဆေးခန်းမှပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။
သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်ကြပြီး, အမြောက်အများအတွက်လက်ကမ်းစာစောင်များကိုတောင်းဆိုဖို့ကျေးဇူးပြုပြီးလိုပါလျှင် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
သင်တစ်ဦးလူနာဖြစ်ကြပြီးအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိတ္တူကျေးဇူးပြုပြီးတောင်းဆိုရန်လိုပါလျှင် ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ ငါတို့ကိုသငျသညျအသီးအသီးလက်ကမ်းကြော်ငြာ၏ချင်ပါတယ်မည်မျှသိကြကုန်အံ့။ သင့်ရဲ့စာတိုက်လိပ်စာထည့်သွင်းရန်သတိရပါ။
အောက်ကလက်ကမ်းစာစောင်များ pdf format နဲ့အားလုံးဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့များမှာ - မယ့်ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ကိုစာသားပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
SarcoidosisUK ရဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေလက်ကမ်းစာစောင်များလူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးတွေအတွက်စိတ်ကူးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုငါအလွန်အသုံးဝင်တို့နှင့်ကြီးသောအရည်အသွေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အတိုင်ပင်ခံအသက်ရှုလမ်းကြောင်းသမား Interstitial အဆုတ်ရောဂါ, Sarcoidosis ဆေးခန်း, Antrim ဧရိယာဆေးရုံ, မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်
အဘယ်သူသည်ငါတို့ Are နှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါ
အဘယ်အရာကို sarcoidosis သည်နှင့်မဆိုအပြောင်းအလဲများကိုသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းအတွက်မျှော်လင့်ရှင်းပြ
ကျေးဇူးပြု ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ တစ်ဦးမိတ္တူလက်ခံရရှိရန်ဘာသာရပ် '' အလုပ်ရှင်များလက်ကမ်းစာစောင်များ '' နှင့်သင်၏ဗြိတိန်စာတိုက်လိပ်စာနှင့်အတူ။
သငျသညျလညျးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် ဤနေရာတွင် pdf version ကို.
Sarcoidosis နှင့်ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့်ဗီတာမင် D ကိုလူနာပြန်ကြားရေးလမ်းညွှန်